Ameerikaan Haasaa gorsaa Abiyyi Ahmad balaaleffaate. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAmeerikaan Haasaa gorsaa Abiyyi Ahmad balaaleffaate.
Gorsaan Dr. Abiy Ahimad Diyaaqun Daani’eel Kibirat haasaa jibbiinsa namummaa kan nama amantaarraa hin eegamne dubbate jechuun Ameerikaan balaaleffatte.
Dhimmoota hawaasummaafi waliin jireenyaa irratti gorsaa Dr. Abiy Ahimad kan ta’e Diyaaqoon Daani’eel Kibrat waraana mootummaa Naannoo Tigraay fi Federaalaa gidduutti adeemaa jiru ilaalchisee tibba darbe dubbii inni dubbate dubbii hamaafi haasaa jibbiinsaadha jechuun mootummaan Ameerikaa balaaleffate.
Dubbii himaan Ministeera Haajaa Alaa US, gaafa Wiixata haasaa Diyaaqoon Daani’eel haasa’e ilaalchisuun yaada kennaniin ”dubbiin Diyaaqunichaa haasaan jibbinsaa suukkanneessaafi fudhatama hin qabneedha” jechuun ibsuusaa AFP’n gabaasee ture.
Diyaaqoon Daani’eel Kibirat torban dura naannoo Amaaraa dhaquudhaan waltajjii humna waraanaafi miliishaa akkasumas unmataaf haasaa taasise irratti ”jara kana addunyaarraa qofa osoo hin taane qalbii ummata keenyaa keessaas balleessuu qabna. Kana dura Bulguutu si nyaata jennee isa ijoollee sodaachifnu, kana booda maqaa jara kanaatiin daa’imman keenya sodaachisaa guddisuu qabna. Bineensa ta’usaanii yoo himne lamuu akka nutti hin deebine gochuu dandeenya” jechuun dubbii inni dubbate mata duree marsaa hawaasaa ta’ee ture.
Diyaaqun Daani’eel Kibirat dhimmoota wal falmisiisoofi eenyummaa sabootaa akkasumas amantaa xiqqeessan dubbachuun si’a baayyee komiin kan irratti ka’u yoo ta’u, walakkeessa bara 2013 Dr. Abiy Ahimad mana mareerratti miseensa boordii Dhaabbata maxxansa biyyattii taasisuun kaadhimummaaf yoo filan, miseensonni mana marichaa namni kun ilaalcha madalawaafi wal qixaa kan hin qabne akkasumas jibba saboota cunqurfamoo waan qabuf kaadhimamuun isaa sirrii miti jechuun mormuun isaanii ni yaadatama.
Hiriira Mormii Mootummaa Abiyyi Ahmad Biyya Germany Magaalaa Frankfurt irratti godhame. ﻿ Afaan Jarmaan dhagefadha…
OBN Dr Abiyyi Ahmad dadhabina keenya malee cimina diinaatin miti kan moo'amne
OBN Dr Abiyyi Ahmad dadhabina keenya malee cimina diinaatin miti kan moo'amne jedha dhaggeefadha
Badhaafamuu Dr, Abiyyi Ahmad Irratti Yaadi Uummataa Maal Fakkaata? ADAAMAA, AMBOO — (voaafaanoromoo)---Badhaasa Nobeelii Nagayaa…